Mpanoha-riana… | NewsMada
Misy resaka «mampihomehy» mandeha amin’izao fotoana izao, any ananonanona any. Any ambadibadika any. Resaka mifototra amin’ny mety tsy hahatanteraka, na tsy hisian’ny fifidianana filoham-pirenena mihitsy, amin’ity taona ity. Hatreto aloha, tsy sahy miseho masoandro ireo na izay mikotrika azy fa miezaka manarama, mampiteny, manetsika olona, hivoy ilay fotokevitra amin’ny fomba maro. Na izany aza, fantapatatra ihany ny loharano ipoirany. Asa, mbola mihevitra ny maro ho toy ny zaza bodo azo ambakaina, rebirebena, tambazana amin’ny mena miraviravy, sns, angamba. Na koa manararaotra ny toe-javatra samihafa miseho eto amin’ny firenena, amin’ny lafiny samihafa. Ohatra, amin’ny fahasahiranana iainan’ny maro amin’ny lafiny sosialy, ny tsy fisian’ny fandriampahalemana noho ny firongatry ny asan-jiolahy mihamahery vaika andro aman’alina, …
“Mampihomehy”, satria, efa hatramin’ny ela no niandrandran’ny vahoaka izany fifidianana izany. Fotoana maro ny efa lany nandinihana, nanomanana azy. Eny hatramin’ireo pitsopitsony madinika amin’ny fikarakarana aza. Efa atonta tsy ho ela, ohatra, izao ny biletam-pifidianana, raha ny voalazan’ny Ceni. Azo lazaina ho efa vonona ny lisi-pifidianana, eny na ny hoenti-manana amin’ny fitaovana, vola izay somary nahabe resaka teo alohaloha teo aza. Hatramin’ny firenena namana, toa an’i Afrika Atsimo atsy ambadika kely atsy aza, efa nilaza ny fahavononany hampindrana helikoptera hampiasaina amin’ny fanagonana ny voka-pifidianana…
Efa hita taratra amin’ny fanehoan-kevitra marobe, etsy sy eroa, na amin’ny alalan’ireny fitsidiham-paritra ataon’ny kandidà sasany ireny koa ny fiandrandran’ny vahoaka fatratra ity fifidianana ity. Izao anefa ka mipoitra tampoka eo ny hoe “tsy hisy, na tsy tokony hatao ny fifidianana…”. Hita mihitsy hoe hevitry ny olona na antokon’olona lany bala, tsy mahita afitsoka rehefa voadaka am-bavafo hatrany ny fotokeviny. Tadiavina sy foronina avokoa ny fomba rehetra hanakorontanana ny lamina efa tsara petrapetraka… Mamboly korontana sy fisavoritahana tsotra izao e. Izay mihitsy ny tanjony, raha tsorina. Efa tongotra mby an-dakana anefa ity ka tsy miverina intsony. Izay mikiribiby amin’ny tsy hahatanteraka izany no tena fahavalom-pirenena voalohany ka mendrika hanaovana angaredona. Mpanoha-riana !